Qatar oo si dadban uga hadashay Fahad Yaasiin | KEYDMEDIA ENGLISH
Qatar oo si dadban uga hadashay Fahad Yaasiin
Hamad bin Jassim, oo xilal muhiim ah hore uga uga soo qabtay Xukuumadda Dooxa, ayaa kashifay sir la xariirta in Qatar ay lacag siiso wariyayaal Jawaasiis ah oo ka soo jeeda dalal shisheeye.
MUQDIAHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaarihii hore ee Qatar, soona qabtay xilka Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalkaas Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, ayaa bixiyay wareysi hadal heyn xooggan abuuray, kaasoo ku soo aaday maalmo kadib markii Fahad Yaasiin Baladweyne loogu doortay Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka.
RW Al-Thani, ayaa carabka ku dhifay in ay jireen wariyeyaal Carbeed oo jawaasiis u ahaa waddankiisa hooyo ee Qatar, kuwaas oo hadda qaarkood xildhibaano ka noqdeen dalalkooda, si ay qeyb uga noqdaan hay'adda ugu muhiimsan laamaha dowladda ee sharci dajinta iyo Isla-xisaabtanka.
Waxaa jiray wariyayaal ku jiray payroll-keenna, (Mushaar) lacag ayaa siineynnay, qeyb ka mid ah, hadda waa xildhibaanno, qaarkood waa waddaniyiin, waan aqaan, dalal badan ayey joogaan lacag ayaan siineynay. Ayuu yiri RW hore ee Dooxa.
Wuxuu xusay in sanad kasta ay qaarkood (Wariyayaashu) lahaayeen gunnooyin dheeraad ah iyo edeegyo u gooni ah, si ay u fuliyaan danaha gaarka ah ee Qatar, ka leedahay dalkooda, siyaasad ahaan, amni ahaan iyo dhaqaalo ahaanba.
Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay in ay jiraan Dowlado carabeed oo sidaas si la mid ah sameyn jiray, si ay wariyayaasha ku hadla luuqadda Carabiga, ugu adeegsadaan helidda xogo gaar ah.
Arrintaan ayaa hadal-heyn xooggan abuurtay, waxaana si weyn loola xariiriyay Fahad Yaasiin, oo la rumeysan yahay inuu muddo dheer si hoose ula shaqeynayay sirdoonka dalka Qatar, isla-markaana dhawaan loo booday kursi baarlamaan, inkastoo aan wali natiijadiisa la ansixin.